Momba anay | Cangzhou Hengyue auto parts Co., Ltd.
Cangzhou Hengyue auto parts Co., Ltd. dia miorina ao Hejian, Hebei, akaikin'ny renivohitry ny seranan'i Beijing sy Tianjin, tena mety ny fitaterana.
Ny orinasanay dia fanangonana fikarohana sy fampandrosoana tsy miankina, famokarana, varotra ho iray amin'ireo orinasa mpamokatra orinasa matihanina amin'ny famokarana, efa an-taonany maro ny traikefa famokarana taratasy. Famokarana kapila kapila maherin'ny 100.000 isan-taona. Ny orinasa dia manana karazana haingony matevina sy antonony manamboatra fitaovana, fitaovana fanodinana hafanana, ary koa fitaovan'ny bobongolo mandroso sy fitaovana fitiliana. Ny kalitaon'ny vokatra dia azo itokisana ary manana fanoherana, fanoherana ny hafanana avo sy fiainana lava, sns.
Miorina amin'ny lazany
Manandrana ny tsara indrindra vitany foana izahay hamaly ny filan'ny mpanjifa. Hatramin'ny fivoarana tsy azo ihodivirana ny fanatontoloana ara-toekarena, ny orinasanay dia vonona ny hiara-hiasa amin'ny orinasa manerantany hanatrarana toe-javatra mandresy.